အလင်းခြုံတဲ့သတင်း Zone- New Version | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အလင်းခြုံတဲ့သတင်း Zone- New Version
အလင်းခြုံတဲ့သတင်း Zone- New Version
Posted by alinsett on Oct 2, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing, Critic, Entertainment, History, Members, My Dear Diary, Myanmar Gazette, News, Think Different | 17 comments
မင်္ဂလာပါ …. အရပ်ကတို့ရေ….
အခုတလော သတင်းတွေနောက် လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့… သတင်းတွေနဲ့ ကျုပ်နဲ့ လုံးရင်းလည်ရင်း ချာလည်ပတ်ကို ရမ်းလို့ပါဗျာ… ။
သတင်းတွေနောက်ကို မောင်သူရက လိုက် တာလည်း ပါရဲ့…
မောင်သူရကြီးနောက်ကို သတင်းတွေက ပြေးလိုက်လာတာလည်း ပါရဲ့ပေါ့ဗျာ… ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… မောင်သူရရဲ့ အိတ်ထဲမယ်.. သတင်း အစုံ ပါလာတယ်ဗျို့… ။
ဒီတစ်ပတ်လည်း… သတင်းတွေများ..တက်လာလိုက်တာ.. ။
ဖတ်လိုက်ရတာများ …ဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့… ။
ဘယ်သတင်းက စပြောရမှန်းတောင် မဝေခွဲတတ်တော့တဲ့အထိပဲ ။
ကဲပါလေ… နိဒါန်းပျိုးတာက အရေးမကြီးပါဘူး ။
မောင်သူရ ဖတ်မိတဲ့ သတင်းတွေထဲက… ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ပြန်ပြောပြပါဦးမယ်။
မှတ်တမ်း ကျန်အောင်ပေါ့ဗျာ.. ။
နောက်ဆုံးရသတင်းတခုက စပြောမယ်ဗျ ။
အောက်တိုဘာ ၁ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
US ၊ နယူးယောက်အခြေစိုက် (C P J) သတင်းထောက်များ အကာကွယ်ပေးရေး ကော်မတီကနေ နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်နေတဲ့ ‘ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆု’ ကို
မြန်မာနိုင်ငံက ဧရာဝတီသတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကိုအောင်ဇော် ရရှိသွားကြောင်း သတင်းရရှိသွားတယ်တဲ့ဗျာ… ။
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အနေနဲ့
ပြည်ပမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြေစိုက်ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနဟာဟာ အရေးပါခဲ့ကြောင်း CPJ က အသိအမှတ်ပြု ပြောဆိုခဲ့တယ်တဲ့။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ၂၄ ကြိမ်မြောက် CPJ ရဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆုကို
ဧရာဝတီသတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကိုအောင်ဇော်ကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပြည်ပလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်တွေအနေနဲ့ ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းဟာ
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက် အရေးပါခဲ့ပြီး ၊
ပြည်ပမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး မြန်မာအစိုးရကို ဝေဖန်ပြောဆိုရေးသားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ဇော်ဟာ
စံနမူနာထားစရာ သတင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက် အသိအမှတ်ပြု ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း CPJ ရဲ့ အာရှရေးရာတာဝန်ခံ Bob Dietz ရဲ့ ပြောခဲ့တယ်။
ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် ကိုအောင်ဇော်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက
အမေရိက ပြည်ထောင်စု Stanford တက္ကသိုလ်ကနေ ချီးမြှင့်တဲ့ Shorenstein သတင်းသမားဆုကိုလည်း လက်ခံရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုတစ်ခါ CPJ ကချီးမြှင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆုဟာ ကိုအောင်ဇော် အပြင် ၊
တခြား နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေဖြစ်တဲ့ အကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်လာတဲ့ အီရန်သတင်းထောက် Siamak Ghaderi၊
ရုရှား အခြေစိုက် Dozhd TV သတင်းဌာနရဲ့ အယ်ဒီတာ Milhail Zygar နဲ့
တောင်အာဖရိက City Press သတင်းစာအယ်ဒီတာ Ferial Haffajee တို့နဲ့အတူ ရရှိခဲ့တာပါ။
၂၄ ကြိမ်မြောက် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို နယူးယောက်မြို့က နာမည်ကျော် The Grand Ballroom မှာ
နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့သတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့ Reuters နဲ့ Google တို့ကလည်း ပါဝင်ကူညီကြမှာတဲ့ ။
CPJ ရဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆုပေးအပ်ရေးကို
အမေရိက ပြည်ထောင်စု နဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေ ပါဝင်ထောက်ခံပြီး ထောက်ပံ့ကူညီထားကြကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… ဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုအောင်ဇော်ကြီးရေ… ။
အောက်တိုဘာ ၁ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း။
US မှာ ပထမဆုံးသော အီဘိုလာရောဂါ ဝေဒနာရှင်တဦးကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း …
အမေရိကား ကျန်းမာရေးဌာန ၊ ရောဂါထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဗဟိုဌာန CDC ရဲ့ အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ Tom Frieden က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားဝေဒနာရှင်ဟာ အမေရိကား ၊
အနောက်တောင်ပိုင်း Texas ပြည်နယ် Dallas မြို့ကို စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီး
ရက်အတန်ကြာပြီးမှ ရောဂါလက္ခဏာကို စတင် ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့ အဆိုပါ ဝေဒနာရှင်ကို Texas ပြည်နယ်ထဲက ဆေးရုံတခုမှာ သီးသန့် ကြပ်မတ်ထားပြီး
တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဝေဒနာရှင်ကို ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ရှိခဲ့သူတွေကိုလည်း ရှာဖွေနေပြီတဲ့ ။
US အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မထိန်းချုပ်နိုင်မှာကို သံသယရှိစရာ မလိုကြောင်းနဲ့
ဒီရောဂါဆိုးဟာ US ကို ပျံ့နှံ့သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း CDC အကြီးအကဲက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
Texas ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ အဆိုပါ လူနာဟာ အမေရိကား ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ အီဘိုလာ ရောဂါဝေဒနာရှင် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
(အမေရိကလို နိုင်ငံမျိုးမှာ… အဲဒီရောဂါကို တွေ့ရှိတာ
မောင်သူရကြီး သိပ်မစိုးရိမ်မိပါဘူး ။
မောင်သူရကြီးတို့ ပြည်တွင်းမှာ…အဲဒါကြီးရေက်လာမှာကိုသာ စိုးရိမ်နေတာဗျ။)
စက်တင်ဘာ ၃၀ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေ တိုးတက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီကိစ္စကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အစီအစဉ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ မသင့်တော့ကြောင်း ၊
ဖွံ့ဖြိုးတုိုးတက်မှု အနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံအဆင့် သတ်မှတ်ထားတာရာကနေလည်း ပယ်ဖျက်ဖို့ စတင်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း …
မြန်မာနုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်၊ တနင်္လာနေ့က နယူးယောက်မြို့၊ ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာ ၆၉ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဟာ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ တတိယကော်မတီမှာ ဆွေးနွေးရမယ့် ခေါင်းစဉ်တခုအဖြစ် ဆက်ရှိမနေသင့်တော့ပါကြောင်း ၊ နိုင်ငံတကာအ သိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို အပြစ်တင်မစောဘဲ
လက်တွေ့ ကျကျ အဖြေရရှိရေးကိုသာ ကူညီဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၊
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ပဋိပက္ခအခြေအနေတွေ ရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း အမြဲလိုလို ပြောဆိုဝေဖန်နေတဲ့အတွက်
ဒီအခြေအနေကိုလည်း အထူးအာရုံစိုက်ပြီး ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေပါကြောင်း ၊
နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေနဲ့ အခြေအနေတွေကို အပေါ်ယံအမြင်လောက်နဲ့ မကြည့်သင့်ပါကြောင်း ၊
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနိမ့်ဆုံးနိုင်ငံ LDC အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရာကနေ ပယ်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့
အပြည့်အ၀ သန္နိဋ္ဌာန် ချပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ စတင်နေပြီဆိုတာကို ကြေညာလိုပါကြောင်းနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့လည်း
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို ဆက်သွယ်ပြီး LDC အဆင့်ကနေ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ပြောဆိုပြီးဖြစ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်…
ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်း ပြောဆိုသွားပါတယ်။
(အပြစ်တင် မစောချင်ပါဘူး ။
အဲ…အဲ… မောင်သူရကြီးတို့က ပြန်ပြောချင်တာကတော့….
အပြော မစောနဲ့ပေါ့ဗျာ.. ။
အပြောက ရွှေမန်းတင်မောင်ကြီးဖြစ်ပြီး… ချိုမိုင်မိုင် ကပွဲကြီးပဲ…ရှုစားနေရတာ ရိုး ဟိုးဟိုး နေပြီလေ.. ။
အခုလို ပြောတဲ့ အတိုင်း တကယ် ရွှေမန်းတင်မောင်ကြီးဖြစ်ရင်တော့…ကောင်းတာပေါ့ဗျာ.. ။
ရွှေမန်းတင်မောင်လောက် မက နိုင်ရင်တောင်…
ဖိုးချစ်လောက် ကပြနိုင်ရင် မဆိုးပါဘူး ။
ဟုတ်ကဲ့… အပြစ်တင် မစောဖို့… အပြုနဲ့ အပြ စောပါဦး ။)
စက်တင်ဘာ ၂၉ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာ အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွ ကွန်ရက်ထူထောင်ဖို့ ရောက်ရှိလာတဲ့
ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရဲတပ်ဖွဲ့က မနေ့က ဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်တဲ့…. ။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံက (IS) အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံထူထောင်ရေး စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေ အတွက်
အဖွဲ့ဝင် စုဆောင်းဖို့နဲ့စစ်သွေးကြွ ကွန်ရက် ထူထောင်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဆာမီအန်ရာမန် ဆိုသူကို ဒါကာမြို့မှာ ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။
ဆာမီအန်ရာမန်ဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး၊
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊
IS အဖွဲ့ နဲ့ အယ်ကိုင်းဒါးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နူစရာ တပ်ဦးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့လုံးအတွက် လူသူစုဆောင်းဖို့လာရောက်တာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
သူဟာ တပ်ဖွဲ့ဝင်သစ်တွေစုဆောင်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့၊ အောင်အောင်မြင်မြင် စုဆောင်း ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိဆိုတာတော့ မသိရသေးပါဘူး ။
( စောစောစီးစီး ဖမ်းစီးမိတာ..ကံကောင်းလို့…. ဆိုပြီး
သီချင်းလို ဆိုမနေနိုင်ပါဘူးဗျာ… ။
သူတို့ နိုင်ငံမှာ ဖမ်းမိပေမယ့်…
မောင်သူရတို့ဆီမှာ… ဖမ်းမမိပဲ လှုပ်ရှားနေတာတွေ မရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်မလား ။
မောင်သူရတို့ နိုင်ငံထဲ…. ဒီ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေ ရှိရင်လည်း..
သိနိုင်မိနိုင်ပါစေကြောင်းးးးဆန္ဒပြုရုံပါပဲ ။ )
ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ အပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် မဖြူနှင်းထွေးကို ပြန် မလွှတ်ပေးဘူးဆိုရင်
ပြန်လည်တရားဆွဲဆိုသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်ခရိုင် ၊ လက်ပန်းတောင်းဒေသမှာ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မေလအတွင်း
ကြေးနီစီမံကိန်း အရေးအခင်းအတွင်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့
ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် မဖြူနှင်းထွေးကို ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ လီမိတက်က တရားလိုလုပ်ပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မဖြူနှင်းထွေးဟာ ပြန်ပေးမှု ၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို အန္တရာယ် ပြုစေအောင် သွေးဆောင်ဖျားယောင်းမှု စတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားဆွဲဆိုခံထားရတာပါ။
မဖြူနှင်းထွေး လွတ်မြောက်စေရေးအတွက် ဒေသခံပြည်သူတွေအပါအ၀င် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊
နိုင်ငံရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူများကလည်း အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြေနီကုန်းတဝိုက်မှာ နိုင်ငံရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ စုဝေးပြီး
လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတဲ့ ၂၂ လပြည့် အထိမ်းအမှတ်နဲ့အတူ မဖြူနှင်းထွေးလွတ်မြောက်ရေးကိုပါ ရည်ရွယ်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
မဖြူနှင်းထွေးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ၊ နိုင်ငံရေးတတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအပြင် ၊
ပြည်သူတွေပါ စုဝေးပြီး ဆက်လက် တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ပြောဆိုထားကြပြီး
AHRC အာရှလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကတော့
အခုလို မဖြူနှင်းထွေးကို အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကန့်ကွက် ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
( မဖြူနှင်းဖွေးရေ… အားတင်းထားပါဦး ။
ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးပေးမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆ အရ…
ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့ ဖြစ်မသွားလောက်ဘူးလို့… မျှော်လင့်ကြည့်တာပေါ့ နော့…။
အဲ… ဒါပေမယ့်… လက်ရှိကာလမှာ မကောင်းတာလုပ်ပြီး…ကောင်းကျိုးကို
ဇွတ် အတင်း သိမ်းပိုက် ယူနိုင်တဲ့ အဖြစ်တွေလည်း… ဒီမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာတော့… မေ့လို့ မရ။ )
ရန်ကုန်၊ မြို့တော်ခန်းမရှေ့က မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံဘေးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းကို
အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဖယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးစာကို
ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ စည်ပင်အဖွဲ့တွေ လာကပ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ နှစ်လောက်က သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မိကျောင်းကန်ရပ်ကွက် (၁၊ ၂၊ ၃) မှာ နေထိုင်ခဲ့သူတွေက
သူတို့မြေတွေ အသိမ်းခံထားရတဲ့အတွက် မြေပြန်လည်ရရှိဖို့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံဘေးမှာ သပိတ်စခန်းဖွင့်ထားတာဟာ အခုဆိုရင် ၇ လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ သပိတ်စခန်းခေါင်းဆောင် ဦးစိန်သန်းကို တရားမ၀င် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၈၊ စည်ပင်ပုဒ်မ ၆၈တို့နဲ့ စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခံထားရပါပြီး ၊ မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်းမှာ ဆန္ဒပြသူ ၄၀ ကျော်ကို တရားမဝင် စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲထားပါသေးတယ်။
သပိတ်စခန်းကို ဖယ်ရှားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြေသိမ်းခံပြည်သူတွေကတော့
မြေသိမ်းမှု ပြဿနာကို အစိုးရက ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှ သပိတ်စခန်းကို ပြန်ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
(ကဲကဲ…နှစ်ဖက် တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်တာ..ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါရဲ့ ။
ဒါပေမယ့်…နှစ်ဖက်စလုံးတင်းကြရင်… ဓါးကိုင်ထာားတဲ့ဘက်က… သာလိမ့်မယ်ကွဲ့ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်… အခုလို သပိတ်စခန်းတွေဖွင့်ပြီး ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့်ကို ပြန်တောင်းရဲတာတော့.. အားရတယ်ဗျို့… ။
မောင်သူရကြီးအနေနဲ့… ”ငါတို့ ဝဋ်ကြွေးရှိလို့…အသိမ်းခံရတာ ”ဆိုပြီး ခွင့်လွှတ် ရောင့်ရဲလိုက်မှာကို ကြည့်မရဘူးလေ ။ ဟဲဟဲ ။)
စက်တင်ဘာ ၂၈ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ သံဃာတော်များ ညီလာခံမှာ မြန်မာနိုင်ငံ
မစိုးရိမ် တိုက်သစ်က အရှင်ဝီရသူက အစွန်းရောက် ဂျီဟတ် မွတ်စလင်တိုက်ဖျက်ရေးကို
သီရိလင်္ကာ အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူ လက်တွဲဆောင် ရွက်သွားမယ်လို့ မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အရှင်ဝီရသူရဲ့ ပြောကြားချက်အရ မဘသ ခေါ် အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့
အာရှတိုက်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘောဓု ဗလ သေန ခေါ်
သီရိလင်္ကာ အမျိုးဘာသာသာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကို ထောက်ခံကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊
ဒီကနေ့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် ဂျီဟတ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ သည်းခံခြင်းတရားကို အားနည်းချက်အဖြစ် ရှုမြင်နေကြကြောင်း ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေ ဖျက်ဆီးခံနေရကြောင်း စတဲ့ အချက်တွေ မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေဖြစ်စေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့
ဦးဝီရသူကို ပင့်ဖိတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
သီရိလင်္ကာ မွတ်စလင်ကောင်စီက စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့နေပြီး ၊
အစိုးရက ဦးဝီရသူကို ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပေးလိုက်တာဟာ ပြည်တွင်း ၊ ဘာသာနှစ်ရပ်ကြား ရင်ကြားစေ့ရေးထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့
တမီးလ်အမျိုးသား မဟာမန်အဖွဲ့က ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ သည်းခံခြင်းတရားကို အားနည်းချက် အဖြစ်…ဆိုတဲ့ အချက်က..
.မောင်သူရတို့ ပြန် စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်ပေါ့ဗျာ… ။
အားနာလို့ လိုက်လျောတာဟာ…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အ တာပဲဗျ ။
မောင်သူရတော့…ဒီလိုပဲ မြင်တယ်။ ဆိုတော့… ဒါက တစ်ပိုင်း…
နောက်တစ်ပိုင်းကတော့… အရှင်ဝီရသူ အနေနဲ့… ဒီကိစ္စထဲ…ပါဝင်လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး..
ပြောဆိုဆွေးနွေးစရာတွေတော့ ရှိလာမယ်ဗျ ။
ကျနော့်အမြင်တော့…. ဒီ ကိစ္စမှာ…ဘာသာရေးနဲ့… တိုက်ရိုက် မပတ်သက်သေးသ၍….
ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေ ဝင်မပါသင့်သေးဘူးလို့…ထင်ပါကြောင်း… )
ညာဘက်ခြေသလုံးမှာ ဗုဒ္ဓမျက်နှာတော်ပုံကို ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့
စပိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် ညတွင်းချင်း ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိုက်ကြောင်းဖတ်ရတယ်ဗျ ။
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်က ၊ ညာဘက်ခြေသလုံးမှာ ဗုဒ္ဓမျက်နှာတော်ပုံကို ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့
အသက်(၂၈)နှစ်အရွယ် စပိန်နိုင်ငံသား ဆန်တယ်လီဂရစ် လိုဂျူအန်ကားလို့စ် ကို
အရှေ့ဘက်မုခ်ဓာတ်လှေကား အောက်ခြေ စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ခရီးသည်တစ်ဦးက တွေ့ရှိပြီး
ဘုရားရဲတွေဆီ အကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ၎င်း တည်းခိုရာ
အဲဒီနောက် ၎င်းနဲ့အတူပါလာတဲ့ ဘရာဇီး နိုင်ငံသူနဲ့ အတူ ဘန်ကောက်လေယာဉ်နဲ့ ပြန်လည်စေလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါ စပိန်နိုင်ငံသားနဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံသူတို့ကို အမည်ပျက်စာရင်း သွင်း၊ မသွင်းကိုတော့ အထက်ကို တင်ပြထားဆဲဖြစ်ပြီး
ခြေသလုံးမှာ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပုံ ရေးဆွဲခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြားရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲ
ထိုင်းနိုင်ငံကတင်ထားတဲ့ပုံကို အင်တာနက်ကတွေ့လို့ ထိုး ထားတာသာ ဖြစ်ကြောင်း ၊
အဲဒီ ဆေးမှင်ကြောင်ကို စပိန် နိုင်ငံမှာရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးမှုများအရ သိရပါတယ်။
အလားတူပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ်လ၂ ရက်ကလည်း ခြေထောက်မှာ ဘုရားပုံတော် ဆေးမင်ကြောင်ထိုးထားတဲ့
ကနေဒါနိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ညောင်ရွှေကနေ ညတွင်းချင်းပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
( အင်းပေါ့ဗျာ… အဲပေါ့ဗျာ… ။ အဟက်ပေါ့ဗျာ… ။ အဟင်းပေါ့ဗျာ… ။
ဒီကိစ္စကိုတော့…မောင်သူရကြီးက ပြုံးတမဲ့မဲ့သာ ဖြစ်မိပြီး အထွေအထူးတော့ မပြောလိုဘူးဗျ။
ဘာလို့ မပြောချင်သလဲ ဆိုတော့… ဘုရားပုံတော်ရယ်.. ဆေးမင်ကြောင် ထိုးတာရယ်… ဘာရယ်ညာရယ်တွေကို..
ကဲကဲဆတ် ခံစားချက် မရှိတဲ့အတွက်…မောင်သူရမြင်တဲ့ အမြင်က… ထုတ်ပြောရင် အဆဲခံရမှာသေချာတယ်ဗျ ။
ဒါကြောင့်..ဒီကိစ္စ…အရေးကြီးတယ် ထင်သူတွေ ဆက် ဆွေးနွေးကြပေါ့ဗျာ..။ သာဓု…သာဓု..သာဓု.. )
မြန်မာနိုင်ငံက မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက် အလှူရန်ပုံငွေ ရှာဖွေဖို့အတွက်
နယူးယောက်မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ မြန်မာအစားအသောက်ပွဲကို ရုံအပြည့် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် ။
3hird Medium Band ကနေ ၆ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပလိုက်တဲ့ အဆိုပါ ရန်ပုံငွေ ပွဲတော်ကို
ပရိသတ် ၇၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး လက်မှတ်ရောင်းရငွေနဲ့ သီးသန့်အလှူငွေ စုစုပေါင်း ၂၅, ၀၈၃ ဒေါ်လာ ရရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ပင်ဆီလ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်၊ ပစ်စ်ဘတ်ဂ်မြို့မှာ ရှိနေတဲ့ နာမည်ကျော် အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်း နဲ့ အတူ
နယူးယောက်မြို့က ဝါသနာရှင် အဆိုတော် ၆ ဦး လည်း ဂီတပွဲမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။
ပွဲတော်ကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်တွေကို ကြိုက်ရာအဝစား မြန်မာအစားအသောက်များနဲ့
ဧည့်ခံကျွေးမွေးရာ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသား အစားအသောက် အမျိုးပေါင်း ၄၉ မျိုး ပြုလုပ် ကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပွဲအတွင်း စတုဒီသာ ကျွေးမွေးတဲ့ အစားအသောက်တွေကို စေတနာရှင်တွေက
အရင်းအနှီးရော လုပ်အားပါ စိုက်ထုတ်ပြီး ကုသိုလ်ဖြစ်အလှူဒါန ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
3hird Medium Band အဖွဲ့အနေနဲ့ စုဆောင်းရရှိတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို
မြန်မာနိုင်ငံ နေရာဒေသ အနှံ့အပြားရှိ မိဘမဲ့ဂေဟာများ၊ ကျောင်းများကို လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပြီး
ငွေသားပေးခြင်းထက် မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆန်ဆီစားနပ်ရိက္ခာ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းနဲ့ စာရေးကိရိယာများ၊
ဆေးဝါး၊ အဆောက်အအုံပစ္စည်း ၊ လျှပ်စစ်မီး စသည်တို့ကို ထောက်ပံ့ကူညီမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်၊ မိဘမဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ရေး အစီအစဉ်များမှာ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လည်း စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိဘမဲ့ကလေးတွေအတွက် အလှူဒါနပြုလိုပါက PayPal မှတဆင့်
3hirdmedium@gmail.com ကို ငွေလွှဲပို့ နိုင်ပြီး 3hird Medium အဖွဲ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာကတော့ https://www.facebook.com/3hirdMedium ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီသတင်း ကြားရတာ မောင်သူရကြီး ပက်ပက်စက်စက် ဝမ်းသာတယ်ဗျ ။
ကြည့်လေ… 3hird Medium Band အဖွဲ့နဲ့
အကျိုးတော်ဆောင်တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေး ဘယ်လောက် လှလိုက်သလဲ.. ။
ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ကောင်း ၊
လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ဖန်တီးပုံလည်း မှန် ၊
အောင်မြင်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်တယ် ဆိုမှတော့.. ဘယ်လောက် ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်သလဲဗျာ..။
ဒီပွဲမှာ…ကြိုက်ရာအဝစား မြန်မာအစားအသောက်များနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးရာ မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသား အစားအသောက်
အမျိုးပေါင်း ၄၉ မျိုး ပြုလုပ် ကျွေးမွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာလေး သိရတော့…
မမဂျီး ဆွိကိုတောင် ပြေး သတိရသေးတယ် ။ ဟဲဟဲ ။
မမဂျီးတို့များ အစားအသောက်နဲ့ သူနဲ့ တွဲမြင်လောက်အောင်ပဲ.. ။
ဟဲဟဲ.. အဲ…သိပ် ဟဲဟဲ နေလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး ။
တော်နေ ကြာ… ဟိုကနေ..မောင်ဇိုးလေး ဒညင်းဝက်ကို လူကြုံနဲ့ ခေါင်းခေါက်ခိုင်းနေပါဦးမယ် ။
မမဂျီးရေ…ချစ်ရို့  စတာ နော် ။
ဒါနဲ့…ကျုပ်တို့ရဲ့ ရွာ့သူကြီး(Kai)ရော….အဲဒီ ပွဲထဲ..နွှဲမှ နွှဲလိုက်ရဲ့လားဗျ ။
မေးသာမေးရတယ်… သွားရောက် အားပေးမှာသေချာတဲ့အပြင်…
ခင်ဘုဏ်းနဲ့တောင် စုံတွဲသီချင်း ဆိုချင်ဆိုခဲ့ဦးမှာ..
မြင်ယောင်သေးတော့တယ် ။ ဟဲဟဲ ။
သူကြီးရေ…အဲဒီ ပွဲ သွားခဲ့တယ်ဆိုရင် ဓါတ်ပုံလေးတွေ မျှပါဦး ။
ကဲကဲ… ဒီ အဖွဲ့ရဲ့…လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို သာဓုခေါ်မိပါကြောင်းနဲ့…
သဒ္ဒါ ပေါက်သူများ အနေနဲ့လည်း.. ဆက်သွယ် လှူဒါန်းကြပါဦးလို့…
မိဘမဲ့ကလေးသူငယ်များရဲ့ အကျိုးကိုသာ မျှော်ပြီး..
မောင်သူရက …နှိူးဆော်လိုက်တယ်ဗျ… ။ )
ခါကာဘိုရာဇီတောင်ပေါ်က ပြန်အဆင်းမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ တောင်တက်သမားနှစ်ယောက်ကို
ရဟတ် ယာဉ်တစ်စီးဟာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားပြန်တယ် တဲ့ ။
(အဟက် ။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေကွယ် )
ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ B4 အမျိုး အစား ရဟတ်ယာဉ်ဟာ
ပူတာအိုလေဆိပ်ကနေ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ အခြေစိုက်စခန်းရှိရာ တဟွန်ဒမ်းကျေးရွာကို ရိက္ခာပို့ ပျံသန်းနေစဉ် မိနစ် ၂၀ ခန့်အကြာမှာ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက် ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း ထူးဖောင်ဒေးရှင်းက သတင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအနေနဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက B4 အမျိူးအစား
ပျောက်ဆုံး ရဟတ်ယာဉ် ဟာ နောင်မွန်းမြို့နယ် ဂါတုရွာအနီးမှာ ထိုးကျသွားတာကို တွေ့ရကြောင်း ရွာခံတစ်ဦးက သတင်းပေးတာကြောင့် ဂါတုရွာအနီးမှာ ထူးဖောင်ဒေးရှင်းက ရဟတ်ယာဉ်တွေအပြင် စစ်တပ်နဲ့အတူ ဒေသခံတွေနဲ့ပါ ပူးပေါင်းရှာဖွေနေကြောင်း သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံက ရဟတ်ယာဉ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့အတူ
မြန်မာလူမျိုး ရဟတ်ယာဉ်မှူး ဦးအောင်မြတ်တိုး ၊
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းနာယက ဦးတေဇရဲ့ ကိုယ်ရေးလက်ထောက်ဖြစ်တဲ့
ကျွမ်းကျင်တောင်တက်သမား ဦးနမားဂျွန်ဆင်ရဲ့ တူလည်းဖြစ်သူ ဦးရွှေရင်တော်ကြီးတို့ ၃ ယောက် လိုက်ပါသွားခဲ့ကြတယ် တဲ့ ။
တက္ကသိုလ် ခြေလျင် ၊ တောင်တက်အသင်း (သဘာဝခေါ်သံ ဖောင်ဒေးရှင်း) က ကိုအောင်မြင့်မြတ်နဲ့ ကိုဝေယံမင်းသူ တို့နှစ်ဦးဟာ
ခါကာဘိုရာဇီ ရေခဲတောင်ကို သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်က တက်ရောက်ခဲ့ အပြီး ပြန်အဆင်းမှာ
အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားတာ တစ်လနီးပါး ရှိပြီဖြစ်ပြီး
အခုနောက်ဆုံး သတင်းအရ ပေ ၁၆ဝဝ အမြင့်မှာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ တောင်တက်သမား ၂ ဦးရဲ့ တောင်တက်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ အိတ်တစ်လုံး၊
နောက် ပေ ၁၇ဝဝ အထက်မှာ အပြာရောင်အိတ် တစ်လုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
( ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီး…မောင်သူရ တွေးမိတာက…
အဟက်ပေါ့ဗျာ..။ အင်းပေါ့ဗျာ..။ အဲပေါ့ဗျာ.. ။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး ဆယ်ယူမှုကို ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားမှု လျော့ကျသွားတဲ့ အချိန်မှာပဲ..
ဇာတ်ရှိန်မြင့်သွားတဲ့ တောင်တက်သမား ရှာဖွေရေး သတင်းကြီးပေါ့ဗျာ.. ။
ကဲ..ကဲ.. ရှာကြပါဦး… ။
ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းလောက်တော့.. ရှာရ မခက်ဘူးထင်တာပဲ ။
ဆန်းတော့ ဆန်းနေတာပေါ့.. ။
တောင်တက်သမားနှစ်ယောက်ကိုလည်း… အိတ်တွေတော့ တွေ့တယ် ။ လူမတွေ့…သေး ။
ရျာဖွေရေး ရဟတ်ယာဉ်ကိုလည်း ပျက်ကျသွားကြောင်းတွေ့ တယ်.. ရှာမတွေ့သေး…။
အဟက်ပေါ့ဗျာ.. ။ အင်းပေါ့ဗျာ..။ အဲပေါ့ဗျာ… ။ )
စက်တင်ဘာ ၂၇ မှာ ဖတ်ရတဲ့ သတင်း ။
အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံတော် (IS) စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့ရဲ့ အင်အားစုရုံးလာမှုကို အစောပိုင်းကာလတွေမှာ US အနေနဲ့ လျှော့တွက်ထားမိခဲ့ကြောင်း
သမ္မတ ဘာရတ်အိုဘားမားက ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အမေရိကား အနေနဲ့ မိမိတို့ လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ အီရတ်တပ်ဖွဲ့များအပေါ် လိုတာထက် ပိုမိုပြီး
အထင်တကြီး ရှိခဲ့တဲ့အတွက် IS တပ်ဖွဲ့တွေကို လျှော့တွက်ခဲ့မိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
အခုလက်ရှိ အချိန်မှာတော့ US ဟာ မဟာမိတ် နိုင်ငံတွေနဲ့ အတူ ပူးပေါင်းပြီး အီရတ်နဲ့
ဆီးရီးယားမှာရှိတဲ့ IS ပစ်မှတ်တွေကို လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်လျက် ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် IS အဖွဲ့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကို အဓိက အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေတဲ့ ရေနံတွင်းများကို
တိုက်လေယာဉ်တွေက ဗုံးကြဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး ဆီးရီးယားရှိ IS ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေး စခန်းတစ်ခုကိုလည်း ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်
US ဟာ IS အဖွဲ့ကို တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အီရတ်စစ်တပ်နဲ့
ကာ့ဒ်လူမျိုး တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကိုလည်း လက်နက်တပ်ဆင် ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
(အိုဘားမားရယ်…. အိုဘယ့် အိုဘားမားရယ်…. )
စက်တင်ဘာ ၂၇ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
ကမ္ဘာကျော် Walt Disney ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေ ဖြစ်သူ
Mickey Mouse နဲ့ Minnie Mouse ဇာတ်ကောင်ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်တွေကို ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဦးလှမြင့်က တွေ့ဆုံပြီး
မြန်မာနိုင်ငံကို အချိန်မရွေးလာရောက်ဖို့အတွက် ဝင်နိုင်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘော နဲ့ အမှတ်တရသော့လက်ဆောင် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒစ္စနေးကာတွန်းဇာတ်ကောင်များ မြန်မာနိုင်ငံကို အခုလို လာရောက်ဖို့အတွက်
BEC TERO MYANMAR က စီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး မစ်ကီမောက်စ်နှင့် မီနီမောက်စ်တို့ဟာ
နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ ကျော်ကို လှည့်ပတ်သွားရောက်နေရာကနေ အခု မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်ကနေ ၁၂ အထိမှာလည်း ဒစ္စနေကာတွန်းဇာတ်ကောင် ၄၀ ကျော်လာရောက်ဖျော်ဖြေမည့်ကပွဲတစ်ခု
Myanmar Event Park မှာ ကျင်းပဖို့ ရှိတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
(တကယ်တော့ မောင်သူရတို့ အနေနဲ့..
ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်ခံနေရမယ့် အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး ။
ကာတွန်းကားတွေကို တခုတ်တရ ကြည့်နေရမယ့် အရွယ်လည်း မဟုတ်တော့ဘူး ။
ရေခဲအဆိပ်တို့ ဘာတို့ ညာတို့..ရိုက်ထားတဲ့ ဒါရိုက်တာတွေ ကို…
သော့လေးတွေ ပေးခွင့်ရချင်လိုက်တာဗျာ.. ။ ဟဲဟဲ )
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်လာတာ အားရကျေနပ်စရာဖြစ်ပေမယ့်
ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ တခြားဒေသတွေမှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူဆလင်တွေအကြား တင်းမာမှုတွေဟာ
တော်တော် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်စရာ အခြေအနေမှာ ရှိနေဆဲပဲ လို့
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက ထောက်ပြ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုတင်းမာမှုတွေ ရှိနေတာကိုသာ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့တဲ့အပြင်
မြန်မာအစိုးရက ဘင်္ဂလီလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ သတ်မှတ်သုံးနှုန်းတဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက မူဆလင်လူနည်းစုတွေရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိစ္စတွေကို
စနစ်တကျ သေချာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားဖို့ လိုအပ်နေကြောင်းလည်း
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လူမှုစီးပွားဖွံဖြိုးမှု အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းရေး နယ်ပယ် အတော် များများမှာတော့
အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက်
ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ မြန်မာအနေနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အနှောက်အယှက်အတားအဆီးတွေကိုတော့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ လိုကြောင်းလည်း ပြောဆိုပါတယ်။
အမေရိက၊ နယူးယောက် ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာ ပြုလုပ်သွားတဲ့
အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့အရေး မိတ်ဖက်နိုင်ငံများအစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဖက်က လည်း မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို မကြာမကြာသွားရောက်လေ့လာနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူး အကြံပေး အရာရှိ မစ္စတာ Nambiar ကလည်း
သူ့ခရီးစဉ်အခြေအနေတွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေကို အဲဒီ အစည်းအဝေးတွင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
( မြန်မာ့အရေးကို တခုတ်တရ ဆွေးနွေးအဖြေရှာပေးနေတဲ့အတွက်
ဇူးဇူးပါ ဦးဦး ဘန်ကီမွန်းခည ။
မြန်မာနိုင်ငံ့အရေးကို အရေးပါအရာရောက်စေတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်စေတဲ့အတွက်..
အဟဲ…. ရခိုင့်အရေးလောက်ပဲ..ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောတာလည်းပြောပေါ့…
တခြား ကိစ္စရေးရာတွေလည်း.. အများသားပဲမို့… ပြောပါဦး.. ထပ်ပြောပါဦး…
(စိုင်းစိုင်း သီချင်းစာသားလေးနဲ့ တိုက်တွန်းရရင် )
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဆွေးနွေးနေကြစဉ်ကာလအတွင်းမှာပဲ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးတပ်မတော်(TNLA) တို့ကြား
အခုနှစ်အတွက် (၁၂၇) ကြိမ် မြောက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွါးသွားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
NCA မူကြမ်းဆွေးနွေးနေစဉ် ကာလအတွင်းမှာ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုများ ရှောင်ရှားဖို့ ညွှန်ကြားထားပေမယ့်
မရှောင်လွှဲနိုင်ဘဲ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ တအောင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (TNLA) က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
TNLA ဟာ အခြေစိုက် စခန်းမရှိဘဲ ရွေ့လျားစခန်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ နောင်ချို၊ ကျောက်မဲ၊ သီ ပေါ၊ နမ့်ဆန်၊ လားရှိုး၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ္မတူ၊ မန်တုံ၊ မန်ဆန်၊ မန်းပန် အစရှိတဲ့ ဒေသများမှာ လှုပ်ရှာမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ NCA မူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့မှာ
စက်တင်ဘာ ၂၂ရက်မှ ၂၆ ရက်အထိ ငါးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အခုထိ နှစ်ဖက်အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သေးကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
(ဒီသတင်း ဖတ်ပြီးပြီးချင်း… ဘာကို သွားသတိရလဲဆိုတော့…
Mr.Bean ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Johnny English ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းဗျ… ။
အဲဒီ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ တခြားနေရာကရောက်လာတဲ့ စုံထောက်ကြီး Bean က…
”ဒီနယ်မြေဟာ လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား”လို့…မေးတော့ …
နယ်မြေခံ စုံထောက်ငယ်လေးက ပြန်ပြောလိုက်တာ…
”ဒီနေရာ ဟာ… ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလုံခြုံဆုံး နေရာပဲ…’‘တဲ့ ။
အဲဒီစကားလည်း ဆုံးရော… အုန်းခနဲ….ပဲ… ဗုံးတလုံး ထ ပေါက်ကွဲတယ် ။
Bean ဖြစ်သွားတဲ့ မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာဗျာ… ဝက်ဝက်ကို ကွဲရော ။
ဟဲဟဲ ပေါ့ဗျာ… ။ အင်းပေါ့ဗျာ… ။ အဲပေါ့ဗျာ… ။
အခုလည်း..ဒီသတင်းကြီးဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာဗျာ.. ။
အဲ….အဲ.. သတင်းကို ရယ်ရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်… ။
သတင်းဖတ်အပြီးမှာ.. တွေးမိတဲ့ Bean ဇာတ်ကားကြောင့် ရယ်ရတာ.. ။ အဟွတ် ။ )
ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့
တယ်လီနောမြန်မာက ဆင်းမ်ကတ်တွေကို စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်ကစပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ နေပြည်တော်တို့မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စတင် ရောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။
တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်တွေရဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကတော့ မည်သည့် ကွန်ရက်မဆို
တမိနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်နှုန်းနဲ့ ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး SMS တစောင်ကိုတော့ ၁၅ ကျပ် နှုန်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
တယ်လီနောအနေနဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုခ ကောက်ယူရာမှာ ပုံစံ နှစ်မျိုးသတ်မှတ် ထားပြီး သာမန်အင်တာနက် အသုံးပြုသူတွေအတွက်
အမြန်နှုန်း တစက္ကန့်ကို 300Kbps အထိ ရရှိနိုင်မယ့် MY Internet ကို 1MB လျှင် ခြောက်ကျပ်နှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်နှုန်းပိုမြင့်တဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုလိုသူများအတွက်တော့ တစက္ကန့် လျှင် 2MB အထိ မြန်နှုန်းရနိုင်မယ့်
Smart Internet ကို 1MB လျှင် ၁၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆင်းမ်ကတ်စဝယ်တာနဲ့ MY Internet စနစ်ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး
ပိုပြီးမြန်တဲ့ အင်တာနက် (Smart Inter-net) ကို အသုံးပြုလိုသူများအနေနဲ့ SMS နံပါတ် 500 ကို မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနော ဆင်းမ်ကတ်တွေကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကို
ရက် ၃၀ တာ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး Wikipedia Myanmar ကိုလည်း အခမဲ့ အသုံး ပြုခွင့်ပေးထားကြောင်း ၊
တယ်လီနောရဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်များကို တထောင်ကျပ်၊ သုံးထောင်ကျပ်၊ ငါးထောင်ကျပ်နဲ့ တသောင်းကျပ် စသည်ဖြင့်
ရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး တထောင်ကျပ် ငွေဖြည့်ပါက ၁၅ မိနစ် အခမဲ့ဖုန်းပြောဆိုခွင့် နဲ့ အင်တာနက် 15MB အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
တသောင်းကျပ် ငွေဖြည့်ပါက ဖုန်း ၁၂၀ မိနစ် အခမဲ့ဖုန်းပြောဆိုခွင့်နဲ့ အင်တာနက် 120MB အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့်ရရှိနိုင်ကြောင်း… သတင်းရရှိပါတယ် ။
(ဂလုစ်…. ပြောသလို အဟုတ်ဖြစ်ပြီး…ဖြစ်သလိုနဲ့
အဟုတ် အလုပ်တွင်နိုင်ပါစေကြောင်း…ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရပါတယ်ပေါ့ ။
အဝိုင်းလေး လည်နေတာကို ထိုင်ကြည့်ခ ပုံမှန်ဖြတ်ရုံမက..ပိုဖြတ်တာတို့…
မဆင့် မှား ပို့တာတို့ (မဆင့်တူမလေးကို မှားပို့ရင် လက်ခံတယ်…ဟဲဟဲ…ဂလုစ် )
ဖုန်းချင်း လက်တစ်ဖက်စီကိုင်ပြီး ကပ်ခေါ်တာတောင်
စက်ပိတ်ထားပါတယ်တို့…ဘာတို့.. ညာဝါးမနေရင် ပြီးတာပါပဲ.. ။
မဝေဖန်ရဘူးဆိုရင်တော့လည်း ….. မဝေဖန်ဘူးလို့ပဲ….ထားလိုက်ဗျာ.. )
စက်တင်ဘာ ၂၆ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
အမေရိကပြည်ထောင်စု ၊ အိုကလာဟိုးမားမြို့အနီးရှိ ဗောင်းဖု(ဒ်) အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဂိုထောင်မှာ
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရပြီး အခြားတစ်ဦးကို ဓားနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးသွားတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်ကြီးဟာ အမေရိကပြည်ထောင်စု တခုလုံးကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေတဲ့အထိ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၃၀ ခန့် ရှိတဲ့ ” အော်လ်တန် အယ်လက်ဇန်ဒါး” အမည်ရှိ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟာ
စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်၊ သောကြာနေ့က ဗောင်းဖု(ဒ်) အစားအသောက် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး အလုပ်ရုံရှေ့မှာ သူ မောင်းနှင်လာတဲ့ ကားနဲ့ အခြားကားတစ်စီးကို ဝင်တိုက်ပြီး ရပ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် အလုပ်ရုံထဲကို လမ်းလျှောက် ဝင်သွားခဲ့ပြီး ဂိုထောင်ထဲမှာ ပထမဆုံး တွေ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး
ကော်လင်းန် ဟတ်ဖို့ဒ် (အသက် ၅၄ နှစ်ရှိ ) ကို ဓားနဲ့ထိုးပြီး ခေါင်းဖြတ် သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ထရေစီ ဂျွန်ဆင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကိုလည်း ဓားနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဗောင်းဖု(ဒ်) ကုမ္ပဏီရဲ့ အရာရှိ (အရန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်) က ပြစ်မှုကျူးလွန်နေသူကို သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်ပစ်ခတ်ပြီး
ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ တရားခံကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
အဆိုပါ တရားခံဟာ မကြာမီကပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး ၊
အလုပ်ထဲက အခြား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို သူ့လို ဘာသာပြောင်းဖို့ စည်းရုံး ဆွဲဆောင်နေခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
US မှာ အခုလို ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ခေါင်းဖြတ် သတ်ပစ်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခြင်းဟာ လက်စားချေခြင်းလား ၊
ဒါမှ မဟုတ် အစ္စလာမ်အစွန်းရောက်အဖြစ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခြင်းလားဆိုတာ ကွဲပြားစွာ မသိရသေးတာကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့ နောက်ကြောင်းနဲ့
အဆက်အသွယ်တွေကို ခြေရာခံ ဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် အက်ဖ်ဘီအိုင် ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က တာဝန်ယူထားကြောင်း သိရပါတယ်။
(အေးဗျာ… ခေါင်းဖြတ်သတ်တာတွေတော့ ခေတ်စားလာသလိုပဲ… ။
လူအချင်းချင်း နှိပ်စက်ခြင်း…ကင်းရှင်းကြပါစေဗျာ…. ။
ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တဲ့ အဖြစ်တွေ
မမြင်လို မကြားလို ဘူးပေါ့ဗျာ… ။
လူတိုင်း ပြုသမျှ အကြောင်းတွေဟာ…
ကမ္ဘာမြေ ငြိမ်းချမ်းစေမယ့် အကျိုးကို သက်ရောက်နိုင်ပါစေကြောင်း….…. )
စက်တင်ဘာ ၂၅ မှာ ဖတ်ရတဲ့ သတင်း ။
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းကြီးကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ၃၆/၂၀၁၄ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် အပိုဒ် (၇၀) အရ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ မြို့သစ်စီမံကိန်းကို အချိန်ကာလ အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းထားကြောင်း
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ပြန်လည်စိစစ်ဖို့ ကိစ္စရပ်တွေ ရှိလာတာကြောင့် ၎င်း စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး
ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်လည် စတင်မှာကို မပြောနိုင်သေးကြောင်း ….
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရှိရပါတယ်။
( ပလုံ = စွပ် )
စက်တင်ဘာ ၂၅ မှာ ဖတ်ရတဲ့သတင်း ။
မြန်မာစစ်တပ်က ကလေးစစ်သား ၁၀၉ ယောက်ကို တပ်ထဲက ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တုန်းက ကလေးစစ်သား စုဆောင်း အသုံးပြုတာ ရပ်ဆိုင်းဖို့ အစိုးရက သဘောတူထားတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ
အခုအကြိမ်ဟာ အရေအတွက် အများဆုံး ထွက်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ပြီး သြဂုတ်လက ၉၁ ယောက် ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း အပါအ၀င်
စုစုပေါင်း ထွက်ခွင့်ပြုပြီးတဲ့ ကလေးစစ်သား ၄၇၂ ယောက် အထိ ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ကလေးစစ်သား စုဆောင်း အသုံးပြုမှု ရပ်ဆိုင်းရေး ကြိုးပမ်းချက်တွေကို
အလေးအနက်ထားကြောင်း ပြလိုက်ခြင်းပါပဲ လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးသူငယ်များ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF က စက်တင်ဘာ ၂၅မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရစစ်တပ်အပြင် တခြား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခုနစ်ဖွဲ့ထက်မနည်းကလည်း
ကလေးစစ်သား စုဆောင်းအသုံးပြုနေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ပြောဆိုထားပါတယ်။
(ကိုင်း…. စစ်သားလူထွက် လူမမည်လေးတွေတော့ ပေါ်လာပြီ ။
မထူးဘူးကွာဆိုပြီး ဓါးပြကြီးတော့ လုပ်မစားလောက်ဘူးလို့  မျှော်လင့်ပါတယ် ကလေးတို့ရေ... ။ )
မြန်မာနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့ ၁၉ ကြိမ်မြောက် မိတ်သဟာယ ဈေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကို
နယူးယောက်မြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ပွဲတော်မှာ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတဝိုင်းနဲ့ တီးမှုတ်သီဆို ဖျော်ဖြေမယ့်အစီအစဉ် အပြင်
ကံစမ်းမဲ ဖွင့်လှစ်ပေးမယ့် အစီအစဉ်လည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရဲ့ မိတ်သယာယ ဈေးရောင်းပွဲတော်ဟာ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ကြတဲ့ မြန်မာစားသောက်ဖွယ်တွေကြောင့်
နယူးယောက်မြို့မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ရိုးရာပွဲလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး
မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားအစားအသောက် အမျိုး ၂၀ ကျော်ကို တပွဲကို
၄ ဒေါ်လာမှ ၆ ဒေါ်လာအတွင်း ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ သုံးဆောင်နိုင်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ပွဲတော်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှား ပျော်ရွှင်ဖွယ် အစီအစဉ်တခု ဖြစ်တဲ့ ကံစမ်းမဲအတွက် ယခုနှစ်မှာ…
ပထမဆုက I Pad Air 16GB ၊ ဒုတိယဆုက GoPro Hero3ကင်မရာနဲ့ တတိယဆုကတော့
Kindle Fire HD 8GB တက်ဘလက် ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီး တခြားဆုမဲများလည်း ထည့်သွင်းထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်တစောင်ကို ၂ ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ပွဲတော်နေရာ Sunnyside Community Hall
41-20 Queens Blvd.
ပွဲတော်နေ့ရက် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်၊ စနေနေ့
ပွဲတော်အချိန် နံနက် ၁၁ မှ ညနေ ၅ နာရီ
အဲဒီ ပွဲလေးလည်း မလွတ်ရဘူး ဟုတ် ? ။
ပြောသာပြောရတာ… မောင်သူရကြီးလည်း US မှာ လုပ်သမျှ မြန်မာဆိုင်ရာ ပွဲလမ်းသဘင်တွေဆို…သိပ် စိတ်ဝင်စားတာဗျ ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝင်ပါချင်တာရယ်.. ။
လာဖြစ်ရင် ပါဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာ… ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်… သူကြီးသာ သွားဖြစ်လို့…
ကံစမ်းမဲပေါက်ရင်လေ… I Pad Air 16GB ၊ GoPro Hero3ကင်မရာ ၊
Kindle Fire HD 8GB တက်ဘလက် …
အဲဒါတွေ အကုန် မောင်သူရကြီး ကြိုက်တယ်လို့… ။
အဲဒါလေး သတိရဖို့ပါ.. ။ အဟိ ။ )
အမေရိကား ၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ ဓမ္မရက္ခိတကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ …
သံဃာတော်များ စုပေါင်းပြီး ပဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကို
အောက်တိုဘာလ (၄) ရက် ညနေ ( ၄း၀၀ ) မှာ စတင် ကျင်းပပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
သံဃပဝါရဏာပွဲ ၊ မီးပူဇော်ပွဲ ၊ ဆွမ်းတော်ကြီး ကပ်လှူပွဲတို့ကို အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့ ၊နံနက် အာရုဏ်တက်ချိန်မှာ
စတင်ကျင်းပ မှာဖြစ်ပါသောကြောင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ကြွရောက်ပြီး ကုသိုလ်တော် ယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ရပါတယ်။
အလင်းခြုံတဲ့ သတင်း Zone ကို တင်ပြပုံ ပြောင်းပြီး တင်လိုက်တယ်ခင်ဗျ ။
ဖတ်ရှု အားပေး ဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး လို့….
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာ ၊ ၂ ရက် ။
ပထမ သတင်းရယ် နောက်ထပ် ဦးဝီရသူရဲ့ သီရိလင်္ကာ သတင်းရယ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး နောက်ထပ် ဖြည့်ချင်တာလေးကတော့
မနေ့ညပိုင်းလောက်က ဧရာဝတီ သတင်းဌာန ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ပိုင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် http://www.irrawaddy.org ဟာ မြန်မာအခြေစိုက် Blink Hacker Group (BHG) ရဲ့ လက်အောက်ကို ကျရောက်သွားပါကြောင်း
နိုင်ဂျန်ဂါး သတင်းတွေကိုတော့ ထင်မြင်ချက် မပေးတတ်ဘူးဗျ။
မြန်မာ ပြည်တွင်း သတင်းတွေ ဖတ်ကြည့်ရတာကတော့
ကိုယ်တွေဆီမှာ တစ်ခုခု တောက်တလွဲ လုပ်လိုက်တယ်
အဲ့ဒါကို လူတွေက ဝိုင်းအော်တယ်
မလုပ်တော့ဘူး ဆိုပြီး ရပ်ပလိုက်တယ်
ကလေး စစ်သား ကလေး လုပ်သား တွေ ထားတယ်
အဲ့ဒါကို ဝိုင်းအော် တယ်
အော်တော့ မလုပ်တော့ဘူး ဘွာတေး ဆိုပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်
အခုကျတော့ ဒီ ကလေးတွေ ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ဆိုတာ က ပြဿနာ ဖြစ်လာရော
(ကျောင်းထားဖို့လဲ မိဘတွေက မတတ်နိုင်လောက်ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ အလုပ်ထွက်လုပ်နေရတာကလား)
အိမ်ဖော် ကိစ္စတုန်းကလဲ အဲ့လိုပဲ
အဲ့တော့ ဒီ အမျိုးသမီး တွေ ဘာလုပ်စားကြမလဲ ဆိုပြီး (တချို့တွေက) ထောက်ပြ ပြန်ရော
hydra အကောင်ကြီး လို ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ မှာ
ခေါင်းတွေကို တစ်ခေါင်းချင်းစီ လိုက်ဖြတ်နေရင်တော့ ခေါင်းတွေ ပို ပွားလာမှာပဲ
တကယ့် အဓိက ပြဿနာကြီး ကို ရှင်းသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါကြောင်း
(အဲ့ဒီ အဓိက ပြဿနာ ဆိုတာကြီးကလဲ အတော်ကြီးကို ရှင်းယူရမယ့် ဟာကြီးရယ်း) )
တောက်တလွဲ အစိုးရက လုပ်မှတော့
အဲလာကို သူတို့ ဆက်ပြီး တောက်တလွဲမလုပ်နိုင်အောင်
ကိုယ်တွေက မဲကို တောက်တလွဲ မပေးမိဖို့ပဲ လိုတော့တယ်။
ဟို မောင်တိန်သတင်းမှာ သုညတွေကျန်ခဲ့တယ်မောင်သူရကလေး… အဲ့ဒီအမြင့်တွေက သများတက်တဲ့တောင်တွေ..
အဲဒါက… အိတ်တွေ ရှာတွေ့တဲ့ အမြင့်နေရာကို ပြောတာလေ…
နေပါဦး ပြန် ကျိလိုက်ဦးမယ်။
တော်တော်များများအတွက်တော့ သိပြီးသား သတင်းတွေဖြစ်မှာပါ။
ရွာထဲ မှတ်တမ်းလေးကျန်အောင် တင်ပေးနေတာပါ။
ရွာက သတင်းရွာ မဟုတ်ပေလား။
နာ့ ကို စိုင်းစိုင်းနဲ့ တွဲ မမြင်ပဲ
လူကြုံတောင် မစောင့်နိုင်ဗူး
တို့မမဂျီးတို့ စိတ်မြန်လက်မြန် ရှိချက်
စိုင်းစိုင်းနဲ့ အစားအသောက် ဘုကို ပိုချစ်လဲ။
စိုင်းရယ် မမဂျီးကြိုက်တဲ့အစားရယ် နှစ်ခုထဲက တခုကိုရွေးဆိုရင်ပေါ့
အစားအသောက်က သစ္စာ အရှိဆုံးမို့ အစားအသောက်ကိုပဲ ရွေးမယ်။
အစားက စားသလောက် ဝလာတယ်။
အချစ်ဆိုတာ ချစ်ရသလောက် ပြန်မရတဲ့ ကိစ်စန တွေ။
အမှတ်မမှားရင်.. ရန်ကုန်နဲ့.. ဟီရိုရှီးမား(ဂျပန်)အကွာလောက်ရှိတာကွဲ့..။
ကြားထဲ..လေဆိပ်က.. ပြည်တွင်းအစစ်အဆေးတွေများသမို့.. ၂နာရီလောက်ကြိုသွားရဦးမယ်…
ကိုရင်ကြောင်တကောင်.. အဲ..အဲ.. တယောက်တောင်.. ယူအက်စ်ရောက်ပြီး.. တသက်မှာ ၁ခါလောက်အယ်လ်အေရောက်ဖူးတာသာမေးကြည့်ပေတော့..
အဲ့ဂလောက်ဂျီး ဝေးတာလား !!!!!
ခုတလော ဒဒင်းတွေပတ်နေတာ။ ခုမှပဲစုံစုံစိစိဖြစ်တော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ဇီးသီးဗန်းသတင်းလေးမပါပါလားအေ။ အိုက်ဒါလေးလဲသိချင်သား
သတင်းတွေနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ ရေးထားပုံလေး ကောင်းတယ်ဗျ
တစ်ခုတော့ပြောချင်တယ် ပြည်တွင်းသတင်း ပြည်ပသတင်း တူရာလေးတွေတန်းစီစုလိုက်ရင် ပို အဆင်ပြေမလားလို့ ဖတ်ပြီးတွေးမိတယ်ဗျ
သတင်း zone က ပို ပို ကျစ်လျစ်သန်မာလာပါတယ် လေးခရေ
အဲ့ဒီအတွက် အကြုံပြုပေးသွားသူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
အခုလောလောဆယ် စီပုံက နေ့အလိုက် တက်လာတဲ့ သတင်းတွေကို စီထားတာပါ။
ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေက နည်းပါတယ်.
အမေရိက က မြန်မာတွေ စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့် သတင်းလောက်ပဲ ထည့်တာပါ။
ဒီသတင်း zone ဆိုတာလည်း
အမေရိကရောက် မြန်မာတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စလုပ်ရာကနေ ရွာထဲ ရောက်လာတာဖြစ်ပါကြောင်း
လေးခ အကြံပေးသလို လုပ်ကြည့်ချင်ပါကြောင်း